Ny fianarantsika an-tserasera | Fiofanana kognitive
Ny fampianarana amin'ny Internet
Etsy ambany no hahitanao ireo fampianarana izay atao an-tserasera (sehatra Zoom).
Fitsaboana ny aphasia (18-19 septambra 2021)
mpampianatra: Antonio Milanese
Rahoviana: Sabotsy 18 sy alahady 18 septambra 2021 (9: 00-13: 00)
Ahoana raha tsy afaka mandray anjara aho? Amin'ny fividianana ny Mazava ho azy dia hahazo fidirana maimaimpoana sy mandritra ny androm-piainana amin'ilay làlana tsy misy ifandraisany izay misy ianao, mizara ny lohahevitra, ny atiny mitovy amin'ilay Mazava ho azy.
Vidiny: Low to High 70 €
Toerana misy: 8 avy amin'ny 30
Programa: Diniho ny programa
Fandraisana fisoratana anarana: Midira eto
Fandraisana andraikitra ao amin'ny DSAs (25-26 Septambra, 2-3 Oktobra 2021)
mpampianatra: Ivano Anemone Antonio Milanese
Rahoviana: Sabotsy 25 septambra (9-13: 00), alahady 26 septambra (8: 30-13: 30), asabotsy 2 oktobra (8: 30-13: 30), alahady 3 oktobra (9: 30-12: 30)
Ahoana raha tsy afaka mandray anjara aho? Ny firaketana dia hijanona mandritra ny 30 andro aorian'ny fiafaran'ny fampianarana
Vidiny: Low to High 145 €
Toerana misy: 18 avy amin'ny 30